Momba anay - Sanhe Great Wall Import And Export Trade Co., Ltd.
Sanhe Great Wall Import and Export Trade Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2012.
Eo anelanelan'ny Beijing sy Tianjin ny orinasa, eo amin'ny 40 kilometatra miala ny seranam-piaramanidina Beijing. Tsy manam-paharoa ny toerana ara-jeografika, ambony ny toerana ary mety ny fitaterana.
Zonay ny manondrana entana ary manana traikefa momba ny fampandrosoana sy ny famokarana 8 taona izahay. Aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 10, toa ny The United Kingdom, Sweden, France, Poland, Russia, America, Brazil, Chile, Uruguay, Australia, Korea South, Singapore, Malaysia, Thailand, India sns.
Ny vokatray lehibe indrindra dia ny lambam-baravarankely PVC, ny lamba malemy PVC, ny lambam-paosy avo lenta, toy ny ravina vita amin'ny silipo Silôna, ny ravina vita amin'ny kodiarana Viton (FKM), ny fehin-kibo vita amin'ny lamba, ny fantsom-bozaka ary ny gorodona vita amin'ny gorodona.
Raha manana vokatra vaovao azonao vidiana ianao, dia afaka manampy anao hikaroka eny an-tsena koa izahay, hanampy anao hitsitsy fotoana sy hery hikarohana any Chine.
Raha manana vokatra hafa ianao avy amin'ny mpamatsy hafa handefasana miaraka amin'ny entanay ao anaty kaontenera iray, dia hiara-hiasa mafy aminao izahay ary hifandray amin'ny mpamatsy anao hafa tsara.
INONA NO TARGETIKA
Vonona foana izahay ny hanome vokatra tsara kokoa sy serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa tsirairay. Ny fahafaham-ponao no tadiavinay indrindra. Ary efa eo an-dàlana hanatanteraka ny nofinofisinay izahay.
Manana filozofia fitantanana kilasy voalohany izahay, mpiasa manana kalitao avo lenta, mpiara-miasa am-pamokarana kalitao, kalitao tsara sy fahatokisana, hanome anao fahitana marina sy azo itokisana, lanja amin'ny vola! Sanhe Great Wall Import and Export Trade Co., Ltd no mpiara-miasa aminao mahatoky mandrakizay. Hahafapo anao ny fampiasana ny vokatray!
2. Vidiny mety
4. Serivisy ambony
5. Serivisy tsara aorian'ny fivarotana